Wire Mesh Factory - Mpanamboatra mpamatsy Wire Mesh, mpamatsy
Rafitra fanodinana peratra fanidiana peratra
Warehouse aforitra vy Wir ...
Galvaniz mihodina indostrialy ...
Euro Style Welded azo mivalona ...
Cag metaly alika lehibe eny ivelany ...
Izahay dia manolo-tena hanome vokatra kalitao izay maneho ny lanjany tsara sy ny fakan-tahaka ho an'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny orinasa. Ny fanjakàn'ny fitaovan'ny zavakanto, ny traikefa lehibe, ny fifehezana kalitao siantifika ary ny ekipa manolo-tena dia manome vahaolana feno harato tariby ho an'ny fampiharana manerantany.
Fehin-tariby avo tadin-tany, fefy vy mitaingina metaly 12.5
Fefy saha mirefy 12-1 / 2 dia mety amin'ny fananganana fefy fiompiana mahery. Raha mila fefy an-tanety mifehy 12-1 / 2 ianao na fefy zaridaina tariby dia ity no perfectolution. Ity tariby 12.5 ity dia maivana ary mamonjy fotoana sy vola ary vita amin'ny tariby vita amin'ny vy. Ireto ambany ireto ny antsipiriany.
Fiarovana ny vorona 25mm Hefy adidy mavesatra ampiasaina amin'ny fananganana tranom-borona mora vidy
Wire nandrisika milentika mafana
Vorona akoho sy voninkazo, zaridaina
Rolls 52 isaky ny paleta
Wire Double Double miaraka amin'ny tariby ambony sy ambany
Miaraka amin'ny Wire nohamafisina mandritra ny 1m (2), 1.5m (4), 2m (5), fa tsy misy vidiny fanampiny
Hot Dipped Galvanized Wire haharitra farany
Fonosin'i Pallet hanamora ny famoahana izany
Tanjona vy vita amin'ny vy tsy misy fangarony
harato Diamondra tariby
In Inch Ao amin'ny mm Wire Gauge Ao amin'ny mm
Fanamarihana: manokana azo atao namboarina manokana.
Garden Compost Expansion Metal Hot Dipped nandrisika
Metal compost nanitatra metaly 80 X 80 X 70 cm
mafana-milentika galvanized, noho izany fanompoana ela velona
tena malefaka ampiasaina
Garden Compost Stretch Metal 80 X 70 cm
Fampandrenesana fantsom-bozaka Rabbit Guard Dip dipaina ho an'ny Garden 24 amin'ny x 50 ft
Fitaovana famaritana amin'ny antsipiriany Fitaovana: Gauge Wire Wire nandrisika nidina: 16 GA Horizontal Spacing: 4 In. Tariby ambony sy ambany: 16GA Fampiharana: Fencing bitro, Fencing amin'ny zaridaina Feature: Ara-toekarena, salantsalany - Adidy avo lenta: fefy soavaly fiakarana, fefy fiompiana biby fiompy bitro sy varmints hafa dia tonga any amin'ny zaridainan'ny tranonao handinihanao ny fampiasana TYL24in. x 50 ft. Rab ...
Fanamboarana ho an'ny gorodona, làlana
3600m Stainless Steel Hexagonal Chicken Wire Netting
Novokarina tamin'ny tariby nandrisika mialoha na tariby tsy misy fangarony araka ny fenitry ny EU, metatra lava be 3600m no mahatonga azy hitohy amin'ny tampon-trano na amin'ny làlana. Ity lambam-pandihizana ity dia mihatra amin'ny volon'ondry vato na volon'ondry fitaratra ho an'ireo tsihy tariby.
123456 Manaraka> >> Pejy 1/30